11 Fahasoavana ara-pahasalamana ho an'ny famatsiana resveratrol - Wisepowder
Resveratrol dia fitambaran'ny zavamaniry polyphenol voajanahary izay miasa toy ny antioxidant. Ny loharanom-pahalalana resveratrol dia misy divay mena, voaloboka, voaroy, voanjo ary sôkôla mainty. Io fitambarana io dia toa mifantoka be amin'ny voa sy ny hoditry ny voaroy sy ny voaloboka. Ny voa sy ny hoditry ny voaloboka dia apetaka amin'ny fanangonana divay resveratrol, ary izany no mahatonga ny divay mena mifantoka be amin'ny resveratrol. Ny fampiasana Resveratrol amin'ny fahasalamana sy ny fahasalamana dia misy ny fitantanana karazana fanamby ara-pahasalamana isan-taona, toy ny aretim-po, ny aretin'i Alzheimer, diabeta ary homamiadana.
Ahoana ny fiasan'ny Resveratrol?
Resveratrol dia miasa amin'ny fiarovana ny ADN ny sela. Izany dia heverina ho iray amin'ny antioxidant mahery indrindra. Ny Antioxidant dia miasa amin'ny alàlan'ny fanampiana amin'ny fisorohana ny fanimbana sela izay matetika vokatry ny radical maimaim-poana. Ny radikaly maimaim-poana dia atody tsy miovaova ateraky ny tara-masoandro, ny fandotoana ary ny fandoroana tavy voajanahary ao amin'ny vatantsika izay mety hiteraka fahasimban'ny atidoha, homamiadana ary fahanterana.
11 Tombontsoa amin'ny fahasalamana amin'ny fametrahana resveratrol
1. Manatsara ny fahasalaman'ny fonao ny famoahana resveratrol
Ao amin'ny fikarohana voarakitra tamin'ny taona 2015, ny siantifika dia namakafaka 6 fanadihadiana mialoha momba izany effects resveratrol amin'ny tsindry ara-dra systolic ary nanatsoaka hevitra fa ny fatran'ny resveratrol avo kokoa (mihoatra ny 150 mg isan'andro) dia nampidina ny tsindry ra systolika.
Mihamitombo ny tsindry ao amin'ny sela amin'ny ankapobeny noho ny fahanterana, satria mihamafy ny fihenjana. Rehefa be loatra dia miteraka aretim-po lehibe amin'ny aretim-po.
Resveratrol dia inoana fa mahavita io tosidra-mihena io amin'ny alàlan'ny fandrisihana ny famokarana oksizenina betsaka kokoa. Ny asidra nitrika dia miteraka fialam-boly amin'ny lalan-drà.
2. Resveratrol dia mifehy ny poti-drà amin'ny fomba tsara
Ny fikarohana amin'ny biby dia manondro fa ny resveratrol dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny tavy amin'ny rà. Ny fandinihana natao tamin'ny 2016 dia nanome sakafo voalavo manan-karena tavy sy proteinina tsy polyaturaturat. Izy ireo koa dia nanome fanampin-tsakafo resveratrol. Tsapan'ny mpahay siansa fa nidina ny lanjan'ny vatana sy ny kolesterola ao amin'ny biby mpikiky, ary nitombo ny haavon'ny kolesterola "tsara".
Resveratrol dia mety misy fiantraikany amin'ny haavon'ny kolesterola amin'ny alàlan'ny fampidinana ny vokatry ny fizimbazaha izay mifehy ny famokarana kolesterola ratsy. Mety hampidina ny oksizenina kolesterola LDL hafa noho ny fahaizany antioxidant.
Nandritra ny fitsarana iray, ny mpandray anjara dia naka sombi-boaloboka izay nampitomboina tamin'ny vovobony resveratrol. Taorian'ny fitsaboana tao anatin'ny 6 volana, dia nihena 4.5 isan-jato ny kolesterola LDL, ary ny kôlômbididididididididididimoka dia nihena 20 isan-jato mahery raha ampitahaina amin'ny vondrona fanaraha-maso izay naka fihan-boaloboka izay tsy nohamasinina tamin'ny resveratrol na plasebo.
3. Famandrihana Resveratrol May ho an'ny Fikambanana Famelabelarana
Ny fitsapana momba ny fitsaboana sasany dia manome soso-kevitra fa ny fantsom-borona resveratrol dia mety hampihena ny soritr'aretin'ny rhinitis alika na ny tazo. Ny mpikaroka dia nampiasa fantsona orona mba hialana amin'ny tsy fahitana ny resveratrol tsy mahomby, midika izany fa nanosika azy ireo mivantana tany amin'ireo faritra misy olana ara-batana izy ireo.
Ao amin'ny fandinihana natao momba ny mpandray anjara 100, ny spray iray intranasal miaraka amin'ny resveratrol 0.1% dia nampiasa in-3 isan'andro isan'andro mandritra ny efatra herinandro dia nihena ny soritr'aretin'ny orona ary nanatsara ny fiainana amin'ny marary voan'ny tazo.
Ao amin'ny fitsarana ara-pitsaboana iray hafa izay mahatratra 68 ankizy manana tazo-boalobaka amin'ny alàlan'ny vovobony, 0.05 isan-jaton'ny fihenan'ny resveratrol intranasal, ary ny beta-glucan 0.33% dia manatsara ny fihazonana ny orona, mihidy, orona mihazakazaka, ary mitsobona. Nomena intelo isan’andro mandritra ny roa volana izany.
4. Ny fanavakavahana resveratrol
Aretin-tsaina fotsiny ny aretim-po izay mitarika amin'ny fanentanana mihomehy sy fanaintainana miaraka. Rehefa alaina tahaka ny zava-mahadomelina ny resveratrol dia mety manampy indrindra amin'ny fiarovana amin'ny fahasimban'ny ratra izany. Ny faharavan'ny cartilage dia mety hiteraka fanaintainana ao amin'ny tonon-taolana ary iray amin'ireo soritr'aretin'ny arthritis.
Ao amin'ny fandinihana, ny fanampin-javatra resveratrol dia nampidirina an-tsokosoko any am-bohon'ireo bitro voan'ny aretin'ny vanin-taolana ary nahatsapa fa ireo bitro ireo dia tsy nanimba firy ny taolam-bitro.
Ny fandinihana biby sy fitsapana bebe kokoa dia naneho fa ny resveratrol dia mety mampihena ny fivontosana ary miaro amin'ny fahasimban'ny tonon-taolana.
5. Vokatry ny otrikaretina resveratrol
Fandinihana fikarohana maromaro dia mampiseho fa ny resveratrol dia mety hisy fiantraikany manohitra ny homamiadana. Ohatra, tamin'ny fandalinana biby natao tamin'ny taona 2016, ny resveratrol dia nampidina ny fihenan'ny fivontosan'ny ovarian taorian'ny simika simika. Ny fandinihana navoaka dia nahatsapa fa ny resveratrol dia manakana ny fihenan'ny glucose ao amin'ny sela homamiadana (ny ankamaroan'ny sela homamiadana dia mampiasa glucose ho loharano angovo).
6. Fiarovana Antioxidant
Mino ny mpikaroka fa manana double roa ny resveratrol antioxidant hetsika ao anatin'io izy io dia miasa toy ny sisan'asa izay mampitombo ny fototarazo, anzima, ary lalana ary ho antioksidanina mivantana.
Miharatsy ny manaitaitra ny alahelo sy ny oksizenina ary mitarika aretina maro avy amin'ny diabeta sy ny aretim-po ka mitotongana sy kansera. Ny suplement an'ny resveratrol dia nanentana ny angovo antioxidant, ny biby ary ny cellular, izay ahitana ireto manaraka ireto:
SIRT sy Sirtuins ny miaro izay miaro proteinina ary mamono ireo fototarazo mifandraika amin'ny fahanterana
NRF2 sy SOD, izay singa tena ilaina amin'ny sehatry ny fiarovana antioxidant sy detox.
Heme-oxygenase 1 izay manapotika ny hemoglobin mankany amin'ny hém ary avy eo manamboatra vy sy antioxidant
Catalase manakana antsika tsy hanimba ny oxidative
Ny fandinihana voafetra ihany koa dia mampiseho fa ny resveratrol dia manamaivana ireo zavatra simika sy radika maimaim-poana.
7. Resveratrol Ho fanatsarana ny fahasalamana ara-pahasalamana
Amin'ny fikarohana klinika misy mpandray anjara 20 manana mony, ny gel resveratrol dia nanome valiny tsara tao anatin'ny roa volana. Nampihena ny fihanaky ny mony efa ho 70 isan-jato izany ary nanatsara ny fahasalamana ankapobeny amin'ny hoditra mihoatra ny 50 isan-jato ka tsy nisy fiantraikany. Resveratrol q10 moisturizer koa dia noporofoina fa vahaolana tonga lafatra ho an'ny hoditra efa lasa antitra, maina, malefaka, ary tondraka. Hitan'ny mpahay siansa koa fa tsy mihena ny vokatra vita amin'ny kosmetika miaraka amin'ny resveratrol ary tsy mihena ary maharitra rehefa voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana (amin'ny 40 ° F / 4 ° C).
8. Fanaraha-maso siramamy
Ny fikarohana iray dia nahita fa ny resveratrol dia manampy amin'ny metabolisma. Tamin'ny lehilahy iraika ambin'ny folo nefa matanjaka, ny resveratrol (150 mg isaky ny 24 ora) dia hita fa manamafy ny fahatsapana ny insuline ary mampihena ny haavon'ny siramamy mandritra ny iray volana.
Nampitombo ny haavon'ny PGC-1a sy SIRT1 ihany koa. Ny SIRT dia anzima tena ilaina amin'ny "famonoana" fototarazo izay manimba, izay mampitombo ny fivontosana, ny tavy tavy ary ny siramamy ao amin'ny vatana. Mandritra izany fotoana izany dia miasa i PGC-1a hiantoka ny fahasalamana mitochondria.
Resveratrol dia nampihena ny siramamy ao amin'ny fikarohana momba ny voalavo diabeta. Manentana ny sela handany glucose betsaka, izay mampihena ny fanoherana ny insuline. Ny fitrandrahana Resveratrol dia miaro ny sela beta izay insuline miafina ao amin'ny sarakaty. Izany dia ahafahan'ny sela mampiakatra ny haavon'ny insuline rehefa midina izy ary mampihena azy rehefa avo loatra.
9. Ny fifehezana testosteron Resveratrol
Araka ny fanadihadiana iray manokana, ny fanampin-tsakafo resveratrol dia mety hanampy amin'ny fandanjanana ny valin'ny estrogen. Mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza na lahy na vavy izany.
Amin'ny totozy lahy, ny resveratrol dia nanamafisana ny fanalan'ny sperma sy testosterone ary tsy nisy fiantraikany ratsy. Ny mpikaroka dia mihevitra ihany koa fa mety hamporisika ny hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG), izay mifehy ny famotsorana ny hormonina firaisana amin'ny hypothalamus amin'ny alàlan'ny pituitary ao anaty ati-doha.
Resveratrol dia nihetsika tamin'ny fomba hafa tamin'ny vehivavy. Tao amin'ny fanadihadiana iray, vehivavy 40 aorian'ny famoahana aotomobilina no nomena resveratrol (1g isan'andro mandritra ny telo volana). Ny Resveratrol dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny testosterone na estrogen fa nanamafy ny proteinina, izay mamatotra ny firaisana ara-nofo sy ny 10 isan-jato amin'ny alàlan'ny ra. Izy io koa dia manatsara ny metabolisma estrogen, izay mety hampihena ny tratran'ny homamiadan'ny nono.
Resveratrol dia manakana ny aromatase enzim, izay mamokatra estrogen ao amin'ny biby ary mandrisika ireo receptors estrogen moramora. Ny molekiolan'ny resveratrol dia mamatotra amin'ireo mpandray vahiny estrogen amin'ny fomba malemy kokoa noho ny estrogen. Misy fiatraikany mandanjalanja ao izany satria mety hanampy amin'ny fampiroboroboana hetsika toy ny estrogen izany raha ambany ny haavon'ny hormonina vehivavy vavy (mety aorian'ny menopause) na mampihena izany rehefa avo be ilay izy.
10. Miaro ny atidohanao ny Resveratrol
Ny fanadihadiana isan-karazany dia naneho fa ny fisotroana divay mena dia mety hanampy anao amin'ny fihenan'ny fihenan'ny kognitika efa antitra. Izany dia mety vokatry ny hetsika anti-inflammato sy antioksida an'ny resveratrol. Ity fitambarana ity dia mirona hanelingelina ireo sombin-tsolika voalaza fa beta-amyloid, izay mandray anjara amin'ny fananganana takelaka, izay marika mampiavaka ny AD (aretin'i Alzheimer).
Ary koa, mety hampihetsika andian-hetsika hetsika manakana ny sela amin'ny atidoha amin'ny fahavoazana mety hitranga izany.
11. Ny fampiasana an'i Resveratrol amin'ny fitantanana ny obesity
Misy porofo kely ara-pitsaboana izay manohana ny fampiharana ny resveratrol amin'ireo marary miady amin'ny toe-javatra mifandraika amin'ny hatavezina. Ny fandinihana biby efa misy anefa dia mampiseho fa ny resveratrol dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny olona miady amin'ny hatavezina.
Taminà fanadihadiana iray manokana dia ny voalavo dia omena sakafo matavy sy menaka resveratrol. Ny fanampin'izany dia mampihena ny adin-tsaina amin'ny oxidative ary miaro ny voalavo amin'ny mety hisian'ny fahafatesan'ny sela fantatra amin'ny hoe Tregs (sela miaro amin'ny hery fiarovana)
Resveratrol koa dia nanakana sela matavy tsy hamokatra tavy vaovao ary mavitrika mankany amin'ny fahafatesan'ny sela matavy amin'ny fandinihana finday. Izany dia nanatanteraka izany tamin'ny fanalavoana ny fototarazo gamma PPAR, izay miteraka lanja mandritra ny fampiharana ny fototry ny UCP1 sy SIRT3, izay manatsara ny fahasalamana mitochondrial ary ny angovo.
Mety hampiakatra ny resveratrol levitra amin'ny alàlan'ny fampiatoana ireo enzymika isan-karazany izay mamoaka tavy toa ny lipase miady amin'ny hormonina, synthase asidra matavy, ary lipoprotein lipase. Ka raha mitady sakafo fanampiny izay afaka manatsara ny lanjan'ny lanja ianao, dia mety handinika ny vovobony resveratrol.
Tsy misy fatra resveratrol voalaza. Na izany aza, ny fikarohana dia nanatsoaka hevitra fa ny fatra ambany resveratrol dia manome fiarovana amin'ny aretina isan-karazany. Etsy ankilany, ny doka resveratrol avo dia avo dia mety hanimba ny fahasalamana.
Ny mpahay siansa dia nampiasa fatra resveratrol samihafa tamin'ny fikarohana nataony. Miorina amin'ny sehatra fikarohana manokana izany. Ohatra, eo amin'ny fikarohana natao hianarana diabeta sy fifandraisana resveratrol, 250 ka hatramin'ny 1000mg dia notanterahina isan'andro nandritra ny 12 herinandro. Amin'ny fikarohana samihafa momba ny anjara asan'ity singa ity amin'ny fitantanana ny tazomoka, dia ny tsiranoka roa an'ny 0.1% nasvera resveratrol dia nafenina intelo ny orona isaky ny 24 ora mandritra ny iray volana. Ireo fatra ireo dia toa manome ny vokatra andrasana.
Vokatry ny lafiny resveratrol
Mbola tsy nametraka mafy akory ny fikarohana effects resveratrol eny naoty avo kokoa. Ny dosage resveratrol be loatra kosa, dia mifamatotra amin'ny fihenan'ny tosidra, tazo, ary mampihena sela rà. Amin'ny olona sasany, ny fatra fanampiny resveratrol avo dia mety hiteraka aretin'ny voa.
Inona Ny fanafody hafa dia hisy fiantraikany amin'ny resveratrol
Resveratrol dia hahatonga ny takelaka ao amin'ny lalan-dreninao ho "miraikitra". Noho izany, dia afaka mampitombo ny risika amin'ny rà raha mihinana warfarin (Coumadin), ibuprofen, clopidogrel (Plavix), aspirin, na fanafody manohitra tsy mivaingana tsy miovaova.
Ny famoahana Best Resveratrol tsara indrindra
Ny famoahana resveratrol tsara indrindra dia tokony ahitana resveratrol 100% voajanahary. Ny fanampin-javatra dia tokony hanome ny 1000 mg ny resveratrol voajanahary isaky ny 24 ora rehefa lanina indroa isan'andro ao anatin'ny ie, 500mg isaky ny kapsily. Ny fanampin-javatra dia tokony avy amin'ny mason-boaloboka mena sy voaloboka ary voankazo blueberry.
The menaka resveratrol tsara indrindra dia tsy tokony misy fatorana, mpameno na preservatives tsy ilaina izay mety hanimba na GMO. Ny fotodrafitrasa famokarana fanampiny dia tokony hanaraka ny GMP. Ny mpanamboatra sasany koa dia manome fangaro premium resveratrol, izay misy ny dite maitso, ny masomboly voaloboka, ny trans-resveratrol, ny vitamina c, ny blueberry, ny ampongabendanitra ary ny acai.
1] Timmers S., Konings E., Bilet L, et al. Vokatry ny fametrehana kalôria ho an'ny 30 andro famerenan'ny Resveratrol amin'ny famokarana angovo sy ny mombamomba ny metabolika ao amin'ny olombelona matanjaka. Metabolika sela 2011; 14: 612-622
Lamuela-Raventos RM, Romero-Perez AI, Waterhouse AL, de la Torre-Boronat MC; Romero-Perez; Waterhouse; de la Torre-Boronat (1995). "Fandinihana HPLC mivantana ny cis- sy trans-Resveratrol ary Pomide Isomers amin'ny divay mena mena Vitis vinifera." Gazety momba ny simia momba ny fambolena sy ny sakafo. 43 (2): 281–283.
Prokop J, Abrman P, Seligson AL, Sovak M; Abrman; Seligson; Sovak (2006). "Resveratrol sy ny glycon piceid dia polyphenol milamina." J Med Sakafo. 9 (1): 11–4
<lahatsoratra teo aloha
1.Inona ny Resveratrol?
2.Ahoana ny fiasan'ny Resveratrol?
3.11 tombontsoa ara-pahasalamana avy amin'ny famenony Resveratrol
4. Fatran'ny Dosage
5.Ny vokatry ny resveratrol
6. Inona no zava-mahadomelina hafa hisy fiantraikany amin'ny Resveratrol
7.Ny famenon-tsakafo Resveratrol tsara indrindra
Momba ny ibeimon